ဒူရှန်ဘဲမြို့(တာဂျစ်: Душанбе, IPA: [duʃæmˈbe]; ပါရှားဘာသာစကားအရ တနင်္လာနေ့ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ, ရုရှား: Душанбе, tr. Dushanbe)သည် တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့နှင့် မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ အမည်နာမခေါ်ဆိုကြခြင်းမှာ တနင်္လာနေ့အား ဈေးနေ့အဖြစ် စည်ကားလေ့ရှိသော ရွာကလေးမှ တဖြည်းဖြည်း ကြီးမားလာခဲ့သော မြို့ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အရောက်တွင်တော့ ဒူရှန်ဘဲမြို့၌ လူဦးရေ ၈၀၂,၇၀၀ ဦး ရှိ၍နေပြီ ဖြစ်သည်။
သမိုင်းတွင် ရွာငယ်လေးတစ်ရွာ ဖြစ်ခဲ့သော ဒူရှန်ဘဲသည် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တာဂျစ် ဆိုဗီယက် ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏ မြို့တော်အဖြစ် ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်၍လာခဲ့သည်။ ၁၉၂၉ ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ ရုရှားဘာသာဖြင့် ဂျူရှမ်ဘဲ(ရုရှား: Дюшамбе, Dyushambe)ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပြီး ၁၉၂၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၁ ခုနှစ်အထိ ဂျိုးဇတ် စတာလင်အား အစွဲပြု၍ စတာလင်နာဘတ်မြို့(တာဂျစ်: Сталинобод, Stalinobod)ဟု သုံးနှုန်းခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
တနင်္လာနေ့တွင် ဈေးနေ့အဖြစ် ပြုလုပ်ရာ လမ်းဆုံတွင် တည်ရှိသောကြောင့် ဒူရှန်ဘဲဈေးဟု ခေါ်ဆိုပြီး ၎င်းမှာ ပါရှန်းဘာသာစကား တနင်္လာနေ့ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဒူရှန်ဘဲမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ရာ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုမည်ဆိုပါက စနေနေ့ပြီးနောက်(shambe) ဒုတိယနေ့(du)ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၅၀၀ ကျော်နှင့် လူဦးရေ ၈၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
မြို့တော်တွင် ဒူရှန်ဘဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် တည်ရှိပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလအရ ရုရှား၊ ဗဟိုအာရှ၊ ဒေလီ၊ ဒူဘိုင်း၊ ဖရန်ဖွတ်၊ အစ္စတန်ဘူလ်၊ ကာဘူးလ်နှင့် Ürümqi မြို့များသို့ ပုံမှန်ပျံသန်းနေသော လေကြောင်းလိုင်းများ ရှိ၍နေပြီ ဖြစ်သည်။ တောင်ပိုင်းဒေသတွင် တာဂျစ်ကစ္စတန် မီးရထားလိုင်းသည် ဒူရှန်ဘဲမြို့အား စက်မှုဒေသများဖြစ်သော ဂီဆာ(Gissar)နှင့် ဗက်ရှ်([:en:[Vakhsh River|Vakhsh]]) တောင်ကြားဒေသ၊ ထို့အပြင် ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ၊ ရုရှားနိုင်ငံတို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ ပေးထားသည်။
ဒူရှန်ဘဲ ထရော်လီဘတ်စကားစနစ်သည် မြို့တော်အတွင်း အများပြည်သူဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဘတ်စကားများအဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး မီသရိုစနစ်တည်ဆောင်ခြင်းကို ၂၀၂၅ တွင် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ မော်တော်ကားများသည် နိုင်ငံ၏ အဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် ဖြစ်၍နေပါသည်။ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံနယ်စပ်မျဉ်းနှင့် ၅၀ ကီလိုမီတာခန်ကွာဝေးပြီး ကားလမ်းများသည် ဥဇဘက်မြို့ဖြစ်သော ဒီနော့ဗ်မြို့(Denov)နှင့် ဆက်သွယ်၍ထားသည်။ ကားလမ်းများသည် မြောက်ဘက်တွင် Sughd Region နှင့်ဆက်သွယ်ထားပြီး ၎င်းမှ ဥဇဘက်ကစ္စတန်နှင့် ကာဂျစ္စတန်နိုင်ငံတို့အား ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ တောင်ဘက်သို့ သွားသော ကားလမ်းများသည် ၁၅၀ ကီလိုမီတာကွာဝေးသော bridge at Panji Poyon တံတားမှတဆင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတို့နှင့် ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။.
↑ TAJIKISTAN။ ၁၈ မတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “etymology: today's city was originally at the crossroads wherealarge bazaar occurred on Mondays, hence the name Dushanbe, which in Persian means Monday, i.e., the second day (du) after Saturday (shambe)”[လင့်ခ်သေ]
↑ Tajikistan: Citizens Ponder Bleak Future Amid Harsh Winter - Eurasianet.Org။ 1 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒူရှန်ဘဲမြို့&oldid=698187" မှ ရယူရန်
တာဂျစ်ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ